နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager 6.14 build 3..&5– Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Mon, Jan 7th, 2013 ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများ | By JojOe (KOThu) နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager 6.14 build 3..& 5
Offcial site မှာ Full version register လုပ်ရင် $29.95 တဲ့နော်….ဒီမှာအလကားယူ
Internet Download Manager ဆိုတဲ့ Downloadmanager
ဆော့လ်ဝဲလ်လေးကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက Internet User တော်တော်များများလည်းအကျွမ်းတ၀င်သိပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်…..အခုတခါတင်ပေးတာကတော့ Internet Download manager ကို version 6.14 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Build3 လေးပါ…အခုဒီ Version လေးမှာတော့အရင် ကထက်
အသစ်တွေလည်းထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်…..ဒါအပြင်အသစ်ထွက် IDM ကို Window 8 မှာပါအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်…IDM ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် Internet မှ Data များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေရုံမကသုံးရတာလွယ်တဲ့ Downloader လေးပါ……Free version ဖြစ်လို့ ရက် 30 ပြည့် Full Version ဖြစ်အောင် register လုပ်ခိုင်းမှာပါ….အဲဒါကိုတခါထဲ Full Version လုပ်လို့ရအောင် patch ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်……
IDM 6.14 build3ယူရန် (Mediafire)
IDM 6.14 build3ယူရန် (Dropbox)
ဒေါင်းလို့ရလာတာလေး ကိုဖြည်လိုက်ပါ…..အထဲက idm6.14.exe ကို run ပြီးသွင်းလိုက်ပါ….နောက်ဆုံး Finish ဆိုသွင်းလို့ပြီးပါပြီ…..ကဲသုံးဖို့သွားမဖွင့်နဲ့ဦးနော်..သူဟာသူပွင့်ပြီး….run နေရင်ပိတ်…. task ထဲကနေexist ပြန်လုပ်လိုက်……..ဒေါင်းတုန်းကပါလာတဲ့
ကဲအမြဲ Update ဖြစ်နေအောင်လို့ IDM 6.14 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Build လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….IDM 6.14 build5ပါ……Patch ဖိုင်ကိုတော့ သက်သက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…….
IDM 6.14 build5ယူရန်…
အချို့ Antivirus သည် patch ကို virus အဖြစ်သတ်မှတ်၍အပျောက်ရှင်းတတ်သည်….
6 comments on “နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager 6.14 build 3..& 5”	nay soe on January 7, 2013 at 4:10 am said:
Reply ↓	Win Htet on January 12, 2013 at 11:14 am said:
Thanks to u.Bro.
Reply ↓	Soe Tun Oo on January 25, 2013 at 4:26 am said:
Patch ဖိုင်ဒေါင်းလို့ မရတော့ လို့ ကူညီပါဦး။Access Denied ဖြစ်နေတယ်။
Reply ↓	seng on January 25, 2013 at 6:01 am said:
Patch file ကို သွား Paste လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ရတော့လဲ Run လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
window cannot access the specified path…. တဲ့
Reply ↓	JojOe (KOThu) on January 25, 2013 at 7:25 am said:
Patch file ဒေါင်းရင် Antivirus ပိတ်ဒေါင်းပါ….g talk acc ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
Reply ↓	philojohn on January 28, 2013 at 2:27 am said:
Kaung Lay Mdy on Huawei U8860 အတွက် Internet Speed မြန်တဲ့ Custom 4.1.2 ROM လေးပါaung on Tactical Assassin For Android V1.0(36MB)Hnin Ze Sue on Star Girlုကိုခန့် on iPhone/Pad/Pod ထဲမှတိုက်ရိုက် Apple ID အသစ်လုပ်နည်းhshdwqhiedwq1h` on သဘာဝကျကျရိုးရှင်းတဲ့ live wallpaper အလန်း လေး9မျိုးပါ Android Development